किन फेरियो एमालेको बोली ? ओलीले देखाए ‘ब्याकफोर्स’ को डर - SangaloKhabar
किन फेरियो एमालेको बोली ? ओलीले देखाए ‘ब्याकफोर्स’ को डर
काठमाडौं। बुधबार व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्ने तयारी गर्दैगर्दा सरकार र माओवादी नेताहरु नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न दिनेमा सत्तापक्षका नेताहरु ढुक्क थिए ।
ओलीलाई उधृत गर्दै उनले भने- ‘तर, ब्याक फोर्सको डर छ ।’ नौ दलको बैठकमा ओलीको संकेत भारतीय चलखेलप्रति थियो ।
मोर्चाले संशोधन पास नभई चुनावमा भाग नलिने बताएको अनलाइन खवरमा समाचार छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले सकेसम्म छलफल नै गर्न नदिने र गर्नु परे सैद्धान्तिक छलफल गरेर संसदीय समितिमा पठाउने विकल्प रोज्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ११, २०७३ समय: १७:५३:२७